Nezvedu - Arenti & Laxihub
Arenti inyanzvi IoT Smart Home chengetedzo mhinduro mugadziri uye mugadziri, akaberekerwa muHoofddorp, Netherlands mugore ra2020; yakavambwa nemainjiniya kubva kumakambani epamusoro ekuchengetedza epasirese. Pamwe chete nekambani inobata, taunganidza makore mana ezviitiko muR & D uye nekugadzira kweakachenjera imba yekuchengetedza makamera kubvira 2017. Muna 2020, izvo zvinotumirwa pagore zvasvika mamirioni e3,8.
Semugadziri weIoT, Arenti anotarisa mukuvandudza matekinoroji ekucheka-pasi. Arenti makamera anoratidzira Artificial Intelligence emagetsi mashandiro, akadai seAI Motion Detection, Inzwi Yekutarisa, Geo-Fenzi Yakavanzika Kudzivirirwa, Inogoneka Yekuona Nzvimbo, Super P2P, Gen. pasina imwe mari yekuwedzera.
Kubva pakutanga chaiko paakazvarwa, Arenti akatsunga kupa huwandu hwakazara hweIoT smart imba zvigadzirwa zvekushandisa kune vashandisi vane zvakasiyana zvinodiwa pasirese. MuArenti vanhu vanogona kuwana zvirinyore makamuri akagadziriswa emukati, makamera epaneti, makamera epanze, kamera dzemafashama, makamera anofambiswa nebhatiri uye mabhero egedhi pasi pemhando mbiri: Arenti yemusika wepamusoro-soro apo Laxihub senzira inodhura.
Arenti anovavarira kuve mumwe wevanogadzira uye vagadziri veIoT Smart Kumba Kuchengetedzwa pasirese, kuve nehunyanzvi uye hunyanzvi nguva dzese nekupa vashandisi kubva kumativi ese epasi zvinotonhorera pazvinhu zvese zveArenti, uye kubatsira vanhu vane smater uye mhinduro iri nyore. kuchengetedzeka kwemunhu neimba. Arenti haazomboshanda chete pakuungana, asi gara uchiteerera zvakanyanya kuR & D, uye kuve mutungamiri wepasirese muindastiri.
Laxihub iri sub-brand yeArenti Technology. Seyakazara-mhinduro smart imba vhidhiyo yekuongorora yekugadzira, Laxihub inotarisa pane kuvandudza nekugadzira kweakachenjera, anoshanda, uye ane hushamwari smart imba zvigadzirwa mitsara. Zvigadzirwa zveLaxihub zvinotungamirwa nehunyanzvi hwaArenti, hwakasanganiswa nemagadzirirwo epakutanga echikwata chekugadzira cheArenti, Laxihub inopa zvigadzirwa zvakanaka, zviri nyore kushandisa, uye zvinodhura kune wese mushandisi. Panguva imwecheteyo, Laxihub anotarisa kune zvakavanzika zvevashandisi uye ruzivo rwevashandisi uye anoshandisa matekinoroji ekucheka-pasi uye nevapi vebasa rakanakisa mune zvigadzirwa zvigadzirwa dhizaini uye nesoftware masevhisi kuverengera kuvanzika kwevashandisi uye kuchengetedza data remushandisi. MuLaxxihub, wese mushandisi anozowana yakanakisa mhando IoT zvigadzirwa.
Kubata kambani yeArenti yakagadzirwa uye yakapinda muindasitiri yeIoT Smart Home Security mu201701
Arenti yakavambwa muhafu yekutanga ye2020, nzvimbo dzekuvhiya mune zvese NL nePRC dzakavambwa02
Yekutanga yemukati yekuchengetedza kamera Arenti IN1 / Laxihub M4 naArenti yakavambwa muna Chikumi 202003
Arenti 2K Aluminium-Yakagadzirwa Optics Smart Kumba Kudzivirirwa Kwemakamera Series yakatangwa muna Zvita 202004
Arenti Optics Series yakahwina Red Dot Dhizaini Mubairo 2021 munaKurume 202105
Arenti Optics Series yakahwina IF Design Mubairo 2021 muna Kubvumbi 202106
Yekutanga 2.4 GHz & 5 GHz mbiri-bhendi yeWi-Fi kamera - Laxihub MiniCam naArenti yakatangwa muna Kubvumbi 202107
KUTAURA, KUNZWA, KUTAURA UYE BATA
NaArenti, kuchengetedzeka kwemunhu neimba zvinova nyore.